ပန်ဒိုရာ: Finding Art in the City - 4
Posted by pandora at 1:01 AM
အင်း . . . ဒီပန်းချီဆရာက နောက်ပိုင်းကို အတော် အားသန်ပုံ ရတယ်။ အဲ . . အဲ . . ရှု့ထောင့်ပေါ့နော်။
ကောင်းသောနေ့ပါ မပန် :)
အပေါ်ဆုံးပုံ နံရံမှာ လုပ်ထားတာ သဘောကျတယ်။
အောက်က ပန်းချီကားတွေကိုတော့ သိပ်ထူးထူးခြားခြား မခံစားမိသလိုပဲ။
ပြတိုက်ထဲ ခေါ်သွားသူက နည်းနည်းပျင်းလာပြီး တပုံချင်း မရှင်းပြတော့ လိုက်ကြည့်သူက ခပ်တုံးတုံးမို့ မခံစားတတ်တာများလား မသိပါဘူး။ :))
ဟုတ်ဒယ်ဗျာ.ပြခန်းထဲရောက်မှ ကိုယ့်ဘာသာပဲကြည့်တော့လို့ ဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကို ကြည့်ရမယ်မှန်းမသိလို့ ကြည့်တတ်သလိုပဲ ကြည့်သွားပါကြောင်း.
Natee Utarit ရဲ့ ဒုတိယကားကို ကြိုက်တယ်၊ မနူဟာ ဘုရားထဲ ပြန်ရောက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်၊
ကျေးဇူး... .... ....။
အပေါ်ဆုံးက ပုံက မသိရင် သစ်မြစ် သစ်ခက်အသေးစားလေးတွေ တွဲရရွဲကျနေသလို............
Early Valentine's day present for you.
You'd absofuckinglutely love this link.
လိပ်ပြာတောင်ပံတွေကြား ခပ်တိုးတိုး ဖြတ်တိုက်သွားတဲ့...